Cunaqabateyno noocee ah ayay Kenya kusoo rogi kartaa Soomaaliya? - BBC News Somali
Xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa meeshii ugu xumeyd gaaray sabtidii lasoo dhaafay
Kenya ayaa dalbatay in Soomaaliya ay sharraxaad buuxda ka bixiso qodobada ay Kenya taabatay ee ku saabsan meelaha shidaalka qaniga ku ah ee la "beeciyay".
Dad ku xeeldheer xiriirka caalamiga ayaa BBC-da u sheegay in cunaqabateynada caalamka ay yihiin labo nooc oo kala ah mid golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay uu ku soo rogo dal ama shakhsiyaad, dalalka kale ee caalamkuna ay ku qasban yihiin inay dhaqan geliyaan, halka cunqabateynta kalena ay tahay mid dal uu kusoo rogo dal kale marka uu xiriirkooda xumaado, dalalka kalena ee caalamka iyo hay'daha caalamiguna aysan ku qasbaneyn inay dhaqan galiyaan.
"Kenya haddii ay tallaabdaasi qaado waxay cunaqbateyn ku soo rogi kartaa siyaasiyiin ay kamid yihiin xildhibaanada iyo madaxda dalka Soomaaliya iyo ganaacsatadii dhaqalaha wadanka Kenya soo geliyay, marka labadaa dhinac unbay cunaqabateyn saari kartaa Kenya". Waxaa sidaasi BBC-da u sheegay Ciid Badal oo ah diblomaasi hore.
Madaxda dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku kulmay Nairobi
"Dakhliga ugu badan oo Kenya ay geyso Soomaaliya Jaadka kamid ah, haddii cunaqabateyn ay soo rogto, Soomaaliya jaadka way joojineysaa, halkaana lacag badan oo faaida ah ayay Kenya ku weyneysaa; sidoo kale shaqo abuurkii xagga Jaadka ayaa meesha ka baxaya, marka cunaqabateynta Kenya iyada ku khasaareyso". Ayuu raaciyay Ciid Badal.
Wuxuu intaa raaciyay in haddii Kenya ay qaado tallaaba ay ku cunqabateeneyso Soomaaliya, ay dowladda federaalka ku khasbanaaneyso in hay'adihii caalamiga, safaardihii reer galbeedka ee fadhigoodu ahaa Nairobi ay usoo wareegaan gudaha Soomaaliya, maadaama aysan boooqan karin, taaso oo uu Ciid Badal sheegay in khasaare kale ay ku tahay Kenya.
Kenya ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeesay in London ay ku "xaraashtay" dhul ay sheegtay inay leedahay, waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ay markale ku nuuxnuuxsatay in hadal waafi ah ay ka sugayaan Soomaaliya.